Duck breed | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Duck breed
Maro ireo zaridaina sy ireo izay manana teboka tsy miankina, biby fiompy ao an-trano. Tsy dia sarotra loatra ny manangona fanafody ampy hiadiana amin'ny fambolena biby, indrindra fa ny tombontsoa azo avy amin'ny fibodoana toy izany. Tsy vitan'ny hoe hena maimaim-poana ianao, fa fantatrao daholo ny momba azy.
Ny zana-boromailala mahazatra indrindra
Any amin'ny sehatra rehetra tsy miankina dia misy lakan-jozoro misy hain-trano. Saingy maro no mino fa lasa isan'andro ny henan'akoho, saingy heverina ho zava-mahamamo ny hena. Saika ny tantsaha rehetra dia miezaka maniry ny tahiriny ao an-trano. Ny fanaovana safidy amin'ny fambolena iray na iray hafa, dia afaka manome ny latabatra amin'ny hena matsiro, ary koa manao vola be amin'ny fivarotana azy ireo.
Ny zavatra manan-danja indrindra momba ny fambolena an'i Bashkir dia mijanona ao an-trano
Ny doka Bashkir dia heverina ho iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny atody sy ny hena. Ankoatra izany, tsy dia mendri-piderana loatra izy io, ary sarobidy sy miavaka amin'ny fiarovana sy ny fiaretana mafy. Ireo singa manokana amin'ny fampiroboroboana duck Bashkir, ny tombontsoa sy ny tsy fahampian-tsainy dia hodinihina ato amin'ity fitaovana ity. Famaritana momba ny loza Manomboka amin'ny famaritana fohy ny tovolahy.
Ahoana no hanomezana tavoahangy mavo malaza ao an-trano
Ankehitriny dia manolo-tena isika handinika ny lokon'ny manga izay mahazatra eo amin'ny tantsaha ao anaty karazana domo ao an-tokantrano: mahafantatra tsara ny endriky ny duck iray, famaritana ny mendrika sy sary samihafa. Ny Blue Favorite dia karazana ketsa izay vao niditra ny tsena ary nahazo tombony be teo amin'ny tantsaha.
Ahoana no ahafahana mitazona trano Star-53
Ny lohahevitr'ity lahatsoratra ity dia ny kintana Star-53, izay antsoina koa hoe "Duck Peking". Izany no safidy lehibe ho an'ny karazana tranokala tsotra, satria ny fironana hifindra mankany amin'ny fomba fiaina ara-pahasalamana dia mandrisika antsika handoa ny sakafo matavy. Ny doka any Pékin dia manome be dia be matavy, nefa tsy voankazo, izay toetra samihafa.
Ahoana ny fomba hanolokolo an'i Peking ao an-trano
Raha toa ianao ka vaovao amin'ny indostrian'ny zava-maniry ary manapa-kevitra ny hanomboka ny traikefanao amin'ny fambolena duck, ny "peking" no safidy tsara hanombohana! Ity dia zary efa tranainy antonona hena, izay azo antoka fa ampiasaina amin'ny fambolena ho an'ny karazana karazana vaovao. Ireo kibay ireo dia mipetaka eo amin'ny sehatra indostrialy sy any amin'ny toeram-piompiana madinika, ary nahazo laza tsara noho ny tsy fisehony, ny fitomboana haingana ary ny hena tsara sy voalanjalanja.
Gogol duck: sary sy famaritana
Ny doka Gogol dia vorona iray avy amin'ny fianakaviana duck izay manana habaka malalaka sy rakitra ivelany ivelany, izay heverina fa iray amin'ireo karazana loko malaza indrindra amin'ny fianakaviany. Raha mametraka io vorona io, inona no mamelona azy ary inona no endriky ny fomba fiainany - ireo sy ireo olana hafa dia hodinihana bebe kokoa ao amin'ilay lahatsoratra. Famaritana sy endriky ny karazana. Ny Gogol mahazatra dia karazana dobo midadasika midadasika misy karazany ivelany.
Duck niampita tamin'ny goose: famaritana ny zaridaina mipoaka Mulard
Voafetra ny fiompiana hybrid mba hanatsarana ny endriky ny fampisehoana, hampifangaro ny tombotsoan'ny karazam-borona maromaro, mba hanamaivanana ny tsy fahampiana. Ity lahatsoratra ity dia natokana ho an'ny hybrid Mulard, ao anatin'izany no hahafantarantsika ny tantara sy ny fanoritsoritana ny zaridaina, ary koa ny tsiambaratelon'ny fambolena. Ny tantaram-pamokarana Ny teny hoe "mulard" dia nindramina avy amin'ny teny anglisy ary avy amin'ny anarana hoe "Muscovy duck" sy "mallard", izay midika hoe raketa sy mardard.
Bashkir Ducks: Ny toetra, ny fandrosoana ary ny fiheverana
Ny tompon'ny tantsaha tsirairay dia mahita fa efa tara loatra ny fanapahan-kevitra momba ny karazana hazan-dranomamy ho maivana sy ara-bola amin'ny fambolena sy ny fikojakojana. Ary raha efa manana na akoho ianao, ny ketsa, gisa, dots, indrindra ireo solontenan'ny bakteria Bashkir, dia safidy tsara ho an'ny vokatra avy amin'ny hena sy ny atody.
White bovard duck: famaritana ny lakroa, ny toetra manokana mitazona ao an-trano
Ny duck Blagovarskaya dia vorona, tsy vitan'ny manamboatra ny lakandran-java-droa amin'ny endriny mahafinaritra, fa koa afaka maniry amin'ny atody maro sy ny henan'akafo. Ny votoaty tsotra sy ny tsy fahampiana dia mahatonga izany ho fanampiana tsara ho an'ny tantsaha sy ny fambolena. Fahasalamana milamina, famokarana mahomby, fanoherana ny aretina - ny zava-drehetra dia mahatonga ny duck ho an'ny biby fiompy mahafinaritra.
Fitiavan'i Cayuga manafaka: ahoana no hikarakarana sy ny fomba hanomezana sakafo ao an-trano
Ny endriky ny Amerikana tsara tarehy Cayuga dia mazàna any amin'ny fampirantiana fampiroboroboana samihafa iraisam-pirenena. Ary tsy mahagaga izany, satria ny volony mainty tsy manam-paharoa misy volom-boanjo mainty sy tononkalo mampiavaka azy dia mampiavaka azy amin'ny karazana hafa. Na izany aza, ny endrika ivelany dia tsy tombontsoa fotsiny amin'ny vorona, manana koa ny taham-pamokarana avo lenta, mitondra azy tsara, ary ny tsirony dia manana tsiro malefaka sy malefaka ary matsiro.
Broiler duck agidel: endri-panambadiana ao an-trano
Ny teny hoe "broiler" dia mampahatsiahy avy hatrany ny akoho, na izany aza, ny kibony dia manana alim-bolana ihany koa. Iray amin'ireny ny lolo fotsy lolo matevina. Ny solontenan'io làlana io dia mitombo tsara any amin'ny toeram-piompiana sy any an-trano. Famaritana sy singa miavaka avy amin'ny breiler duck agidel, izay avy amin'ny karazana roe samy hafa, no mampiavaka ny tombontsoa lehibe indrindra.
Description duck cross temp
Rehefa manapa-kevitra ny handrotsa-doko ao an-trano, aloha dia ilaina ny mamantatra ny zaridaina, satria miankina amin'ny faritra, tsy ny karazany rehetra dia mety hahatsapa tsara. Cross Temp dia tena solontenan'ny oram-panala matevina amin'ny fianakaviana duck, izay mahatsapa tsara ny faritanin'i Okraina, Rosia ary Belarosia.
Mpihazakazaka Indiana (mpihazakazaka): endri-pananganana ao an-trano
Taona vitsy lasa izay, ny fahalianana amin'ny fiompiana indianina tsy mahazatra dia mitombo amin'ny tantsaha sy ny tantsaha mpiompy. Ary tsy mahagaga izany, satria manana vorona tsara tarehy ilay vorona ary malaza amin'ny sakafo matsiro, matsiro ary malefaka. Na izany aza, ny fampiroboroboana ny duck dia tsy hahomby raha tsy misy fitsipika sy fepetra sasantsasany.
Karazana karazana bibikely
Indraindray dia lasa olana ny fisafidianana ny zana-vorona ho an'ny fiompiana zana-trondro, satria eo amin'ny 84 eo ho eo eto amin'izao tontolo izao. Manoro hevitra isika hanomboka hamaritra mazava tsara ny tanjon'ny votoaty. Raha ny tanjon'ny lehibe dia ny mahazo hena, dia tsara ny misafidy ny karazana hena. Raha te haniry atody amin'ny vorona ianao, dia mila mijery ny zana-katsaka.
Ny fitazonana sy ny fiompiana zana-trondro dia mipetraka ao an-trano
Misy karazana vorona izay tsy atsipy ho an'ny hena na atody, fa noho ny feon'izy ireo sy ny feon-kira - ireo duck dia. Izy ireo dia mpanampy mpihaza amin'ny fanangonam-bolo, manintona azy ireo amin'ny mari-pamantarana. Andao hianatra bebe kokoa momba ny fomba hisafidianana, hikarakarana sy hamokarana ireo vorona ireo.
Ahoana ny fomba hanosehana menaka manitra ao an-trano
Ny mpihantona dia antsoina hoe hybrid ho an'ny bibidia izay mifandray amin'ny hena. Ny Broiler dia manintona, toy ny akoho, dia mahazo lanja maimaim-poana, izay ahafahana mahazo 1,5 volana monja aorian'ny fividianana ny mofomamy isan'andro mba hahazoana olon-dehibe manana lanjany lehibe indrindra. Avy eo isika dia hiresaka momba ny safidin'ny tanora mpihinam-bitsika ary mamorona ny fepetra ilaina ho an'ny fikojakojana azy.
Famaritana ny zozoro Okrainiana
Tsy ao anatin'ny toeram-pambolena fotsiny ihany ny gazoala, fa ao amin'ny yards maro miaraka amin'ny akoho koa. Ny karazana vato dia tena lehibe. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny antsibe Okrainiana ianao. Ny niandohan'ny zaridaina Okrainiana mainty Natao tamin'ny tompon'ireo manam-pahaizana manokana momba ny Fambolena Poultry ity orinasa ity.
Famaritana ny zaridaina mena goavam-be Ogar
Indraindray any amin'ny dobo an-tanàn-dehibe na any an-tokantrano tsy miankina dia misy karazana loko manga tsy mahazatra. Ny vorona lehibe iray dia manintona ny saina, ary matetika dia manontany tena ny olona momba ny fiandohany sy ny toeram-ponenany. Amin'ity lahatsoratra ity dia hitantara amin'ny antsipirihany mena sy ny famboleny isika. Ny niandohana sy ny fizarana ny Red Duck, na Ogar, dia solontenan'ny fianakaviana Duck, avy amin'ny Anseriformes.
Famaritana momba ny fambolena ranom-boasary
Ny mpihaza be dia be no malaza. Miantsoroka haingana be izy ireo, tsy mila mampiasa be loatra ny votoatin'ireo vorona ireo, manome hena sarobidy sy matsiro izy ireo. Andeha hojerentsika akaiky ny ohatr'ireo ampongabendanitra ireo, ny fomba hanomezany azy ireo sy ny hikarakarany tsara azy ireo.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Duck breed